Liverpool oo rajo weyn ka qabta inay Kooxda Real Madrid kala soo saxiixato Toni Kroos – Gool FM
Liverpool oo rajo weyn ka qabta inay Kooxda Real Madrid kala soo saxiixato Toni Kroos
Haaruun December 6, 2021
(Liverpool) 06 Dis 2021. Liverpool ayaa lagu soo warramayaa inay rajo weyn ka qabto saxiixa Toni Kroos oo kaga imaanaya dhinaca Kooxda Real Madrid sanadka 2022.
31-sano jirkaan ayaa wali qeyb muhiim ah ka ah kooxda Los Blancos ee uu hoggaamiyo Tababare Carlo Ancelotti, laakiin waxa uu haatan galay labadii sano ee ugu dambeeyay heshiiska uu kula jiro kooxda ka dhisan Caasimadda Spain.
Kaddib markii ay ku guuldarreysteen inay la soo wareegaan bedelka Georginio Wijnaldum suuqii xagaaga, Liverpool ayaa loo saadaalinayaa inay xoojinayso safkeeda khadka dhexe sanadka soo socda, iyadoo xiddigaha diiradda u saaran Reds uu ka mid yahay laacibka Kooxda Napoli ee Fabian Ruiz.
Si kastaba ha noqotee, Warsidaha El Nacional ayaa warinaya in Tababare Jurgen Klopp uu aad u doonayo saxiixa xiddiga ay isku dalka yihiin ee Kroos, kaasoo sidoo kale la la xiriirinayo inuu u wareegi karo kooxda ay ku Liverpool ku xafiiltamaan horyaalka Premier League ee Manchester City.
Warbixinta ayaa intaa ku daraysa in Klopp iyo Kroos ay horay u yeesheen wadahadallo wanaagsan, Reds ayaana qorsheynaysa inay dalab aan la diidi karin ka gudbiso ku guuleystaha Koobka Adduunka si uu ugu soo dhaqaaqo garoonka Anfield.
Kroos ayaa loo diiwaan galiyay labo gool iyo labo caawin 13 kulan oo tartammada oo dhan ah uu ciyaaray xilli ciyaareedkan waxaana uu kula guulaystay Real Madrid afar Champions League, labo horyaalka La Ligaha ah iyo afar koobka Kooxaha Adduunka ah todobadii sano ee uu joogay garoonka Bernabeu.
“Waxaan ka tirsanahay koox doonaysa inay ku guuleysato Champions League, waxaan ahay Parisian” – Mbappe oo ka hadlay mustaqbalkiisa PSG
Kooxda Barcelona oo horumar ka sameysay wadahadallada ay kula jirto mid ka mid ah xiddigaha Chelsea